कपिलवस्तु नगरपालिकाको बजेट ६१ करोड २४ लाख
२०७४ भदौ १३ मंगलबार, कपिलवस्तु । यस क्षेत्रकै पुरानो नगरपालिका कपिलवस्तु नगरपालिकाको चालु आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को कुल अनुमानित बजेट ६१ करोड २४ लाख ५९ हजार प्रस्तुत गरिएको छ । कपिलवस्तुको तौलिहवामा नगरपालिको प्रथम नगर सभामा नगर प्रमुख किरण सिंहले बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण कार्यक्रममा सो प्रस्तुत गरेका हुन । ... बाँकी अंश»
बाजुराको विकास एकद्वार प्रणालीमा लैजान्छु – जिसस प्रमुख
२०७४ भदौ १३ मंगलबार, बाजुरा । बाजुराको समग्र विकासका लागि एकद्वार प्रणालीबाट अगाडि बढ्ने जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार रोकायाले बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बजेट एक अर्ब १८ करोड, वडालाई करोड
२०७४ भदौ १३ मंगलबार, दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि रु एक अर्ब १७ करोड ८६ लाख ९६ हजार ३९७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ... बाँकी अंश»
कांग्रेसले पर्सा र धनुषामा अझैं लगाएन उम्मेदवारको टुंगो
२०७४ भदौ १२ सोमबार, काठमाडौं । आगामी असोज २ मा हुने प्रदेश २ को स्थानीय तहको उम्मेदवार टुंगो लगाउँन बसेको कांग्रेस बैठक अझै जारी छ । टिकटको बाँडफाँड गर्न बसेको बैठकमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । ... बाँकी अंश»
२०७४ भदौ १२ सोमबार, बाजुरा । सबै भन्दा बढी नेता भएको नगरपालिका बुढीगंगाको कार्यविधि अझै पास हुन सकेको छैन । ... बाँकी अंश»
ललितपुर महानगरले भन्यो ‘केही समयकालागि फोहोर उठाउन सक्दैनौं, व्यवस्था आफैं गर्नू’
२०७४ भदौ १२ सोमबार, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले केही समयको लागि आफूहरुले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । सोमबार महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजु महर्जनले विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ... बाँकी अंश»
स्थानीय तहमा कर्मचारीको मनपरी बढ्यो : जनप्रतिनिधिलाई नै टेर्न छाडे
२०७४ भदौ ११ आइतबार, डडेल्धुरा । जिल्ला सदरमुकामस्थित अमरगढी नगरपालिकाका अधिकांश कार्य कक्षहरु रित्तै देखिन थालेका छन् । ... बाँकी अंश»
अर्नाकोट क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोडेर बिकास गरौं : युवा नेता कुवँर
२०७४ भदौ १० शनिबार, गुल्मी । धार्मिक एवम पर्यटकीय प्रचुर सम्भाबना बोकेको निसिखोला गाँउपालीका र ढोरपाटन नगरपालीकाको सिमानामा रहेको अर्नाकोटलाई धार्मिक, साँस्कृर्तिक एवम पर्यटनसँगै बिकास गर्ने युवा नेता तथा नेपाली काँग्रेस बाग्लुङ क्षेत्र नं ३ का सभापति दोर्ण कुमार कुवँरले बताएका छन् । शुक्रबार अर्नाकोट बराह युवा क्लबको चौथो बार्षिक उत्सब समारोहलाई उद्घाटन गर्दे नेता कुवँरले यस्तो बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
‘सुखी सैनामैनाबासी र समृद्ध सैनामैना नगरपालिका’: बजेट ५४ करोड रुपैयाँ
२०७४ भदौ ८ बिहिबार, तिलोत्तमा । सैनामैना नगरपालिकाले आव २०७४।०७५ का लागि रु ५४ करोड ६७ लाखको बजेट पारित गरेको छ । ... बाँकी अंश»
माथागढी गाँउपालिको बजेट ३६ करोड
२०७४ भदौ ७ बुधबार, पाल्पा । माथागढी गाँउपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गाँउपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरि ३६ करोड २ लाख २३ हजार २ सय २ रुपैँयाको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । ... बाँकी अंश»
स्मार्टकार्ट लागू गर्ने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको तयारी
२०७४ भदौ ७ बुधबार, सोलुखुम्बु । सगरमाथाको फेदी भनेर चिनिने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले पर्यटकका लागि स्मार्टकार्ट लागू गर्न तयारी शुरु गरेको छ । ... बाँकी अंश»
पुनर्वास नगरपालिकाको बजेट ४९ करोड, यस्ता छन् योजना
२०७४ भदौ ७ बुधबार, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले आव २०७४–७५ का लागि रु ४९ करोड २२ लाख ७१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । ... बाँकी अंश»
स्थानीय प्रतिनिधिको बुद्धिः चुनावमा अर्कैलाई भोट हालेको भन्दै बाढीपीडितले राहत पाएनन् !
२०७४ भदौ ७ बुधबार, इनरुवा । सुनसरी सदरमुकामसमेत रहेको इनरुवा नगरपालिका–१० कि कुसमीदेवी रामको एक हप्ता अगाडि आएको विनाशकारी बाढीले घरमा भएको सबै थोक बगायो र तर उनले राहत पाएनन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ भदौ ६ मंगलबार, पोखरा । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय पोखराले गत साउन १ देखि भदौ ३ गतेसम्म सञ्चालन गरेको तस्बिरसहितको मतदाता नामावलीमा ३९ हजार ४०१ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । ... बाँकी अंश»
नगरको विकासमा फोहरको राजनीति नगर्न आग्रह
२०७४ भदौ ६ मंगलबार, उर्लाबारी (मोरङ) । उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्ग फागोले नगरको विकासमा राजनीति नगर्न सबैमा आग्रह गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ भदौ ६ मंगलबार, म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं ३ को मौवाफाँट तोकिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७४ भदौ ५ सोमबार, काठमाडौं । २०७२ सालमा भूकम्पको कम्पनले भत्किएका सम्पदा क्षेत्रबाट उत्पादन भएको फोहोर संरचनागत फोहोर व्यवस्थापनमा निकायगत समन्वय शुरु गरिएको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताएका छन्। ... बाँकी अंश»
चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग सक्षम छ : आयुक्त पौडेल
२०७४ भदौ ५ सोमबार, वीरगञ्ज। निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारले असोज २ गते स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन गराउने मिति तोकेकाले आयोग सो दिन निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७४ भदौ ५ सोमबार, इनरुवा । जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीको संयोजकमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका गोपालराज भण्डारी विजयी भएका छन् । ... बाँकी अंश»
२४ दिने बेहोस बच्चाको समेत उपचार गर्न नसकेकी रुन्तीदेवीका लागि भगवान बने विराटनगरका मेयर
२०७४ भदौ ४ आइतबार, विराटनगर । बिनाशकारी बाढीले बस्ने घर पनि बगाइहाल्यो । आम्दानीको स्रोत केही छैन । सुत्केरी भएको जम्मा २४ दिन भएको छ । बच्चा बेहोस छ, उपचार गरुँभने आफूसँग एक रुपैयाँ छैन । यस्तै पीडा र अभावमा बेहोस बच्चा बोकेर रोइरहेकी एक महिला शनिवार विराटनगर महानगरपालिकाको वार्ड नं. १९ को खदरा टोलमा भेटिइन् । ... बाँकी अंश»